महिला फुटबलमा नेपालद्वारा भारत पराजित
२o७६ भदौ २ सोमबार / Monday, August 19, 2019
२o७५ माघ २९ मंगलबार
काठमाडौँ । भारतमा जारी महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले सोमबार घरेलु टोली भारतलाई २–१ ले पराजित गरेको छ ।
नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारीले दुई गोल गरेकी थिइन् । खेलको पाँचौँ र सातौँ मिनेटमा उनले गरेको गोल नै नेपाललाई विजयी दिलाउन पर्याप्त भएको थियो ।
भारतका लागि ८४ औँ मिनेटमा रत्ना देवीले गोल गरेकी थिइन् । नेपाल र भारतबीचको खेल उडिसास्थित कालिङ्गाका रङ्गशालामा नेपाली समयानुसार साँझ ७ बजेदेखि शुरु भएको थियो ।
अमेरिकाले जित्यो महिला फुटबल विश्वकपको उपाधि
काठमाडौँ । महिला फुटबल विश्वकपको उपाधि अमेरिकाले जितेको छ । गएराती सम्पन्न फाइनल खेलमा अमेरिकाले नेदरल्याण्डसलाई २-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै अमेरिकाले लगातार दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो । पहिलो
अमेरिका महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा
काठमाडौँ । अमेरिका महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा अमेरिकाले इङल्याण्डलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो । अमेरिकाको जितमा क्रिस्टेन प्रेस र एलेक्स
महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विराटनगरलाई
काठमाडौं / पहिलो संस्करणको उपमेयर कप अन्तर नगरपालिका महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विराटनगर महानगरपालिकाले हात पारेको छ । हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)को मैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा विराटनगरले बाह्रबिसे
महिला फुटबलःविराटनगरद्धारा धनगढी पराजित
काठमाडौं । राजधानीमा जारी उपमेयर कपअन्तर नगरपालिका महिला फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद शुरुवात गरेको छ । हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)को मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा विराटनगरले
माधव नेपालको वरियता खोसियो, झलनाथ अब तेस्रो वरियतामा
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : अनुसन्धान ब्यूरोको टोली पनि चितवनमा
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको घाटा साढे तीन करोड
बेन स्टोकको शतकपछि इङल्याण्डद्वारा पारी घोषणा
अरुणखोलाको डाइभर्सन बाढीले बगाउदा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
सोमर्स्वीको 'सिंग विथ सुशान्त' लाई युवाहरुको साथ
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी कम्पनी स्थापना
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर बुधबार नेपाल आउदै
झगडा गर्दा गम्भीर घाइतेको हेलिकोप्टरमा उद्धार
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य
आर्चरको बाउन्सर लागेर मैदानमा ढले स्मिथ !
सन्यासबाट युनिभर्स बोसको फेरी यू-टर्न !
अन्तिम खेलमा क्रिस गेलको आक्रामक ब्याटिंग
एसीसी २०२० क्यालेन्डर : छनौट जिते नेपाललाई भारत-पाकिस्तानसँग खेल्ने मौका
रवि शास्त्री फेरी बने भारतीय क्रिकेट टिमको कोच
ब्याटिंगमा धेरै किर्तिमान बनाउने सचिनका बलिङमा छन् यस्ता रेकर्ड
मेसी, रोनाल्डो र भान डाइक युइएफए बर्ष खेलाडीको अन्तिम मनोनयनमा
नेइमारलाई फर्काउन अन्तिम प्रयासमा बार्सिलोना